Mamwe Masevhisi Epamoyo - HV Hipot Electric Co., Ltd.
Sechikamu chehurongwa hwedu hombe hwekutengesa, tinopa kuisa uye kutumira rubatsiro kuti usimuke uye ushande.Mumba mukati meChina kana ini pasi rose, tichavepo kuti tikutsigire.Munguva yekumisikidzwa, kubatanidzwa uye kushanda kweiyo itsva test system, akasiyana masevhisi akakosha anobatanidzwa.Kana zvichidikanwa, tinogona kupa mhiri kwemakungwa kutumwa sevhisi kune vatengi vedu.
2. Spare Parts & Repairs
Kana usina chokwadi nezvezvikamu zvauri kuda, iyo HV Hipot Electric CO., LTD P roduction D epartment uye After-sales D epartment vari pano kuti vabatsire.Mazvikokota edu echigadzirwa achakubatsira iwe pakuona iwo chaiwo zvikamu zvaunoda.Isu tichakubatsira iwe nhanho imwe neimwe yenzira-kubva pakubvunza kusvika pakuendesa.
1. Kutora AC/DC Hipot Test Set semuenzaniso:
HV Sefa Capacitor
2. Kutora CT/PT Calibrator semuenzaniso:
Standard CT ine jekiseni razvino
CT mutoro kesi
Kudzora unit ine kaviri voltage regulator
PT mutoro kesi
Iwe unogona zvakare kutibata nesu kuburikidza neemail nechikumbiro chako zvinosanganisira modhi, serial nhamba uye chero rumwe ruzivo rwaunarwo.Izvi zvichakubatsira kukurumidzira chikumbiro chako.Isu tichagadzirisa chero zvidikanwi uye kupindura chero mibvunzo yaungave unayo pamwe nekukupa iwe yemahara quote.Isu tinoedza kupindura maemail mukati mezuva rimwe rebhizinesi.Kana uchida kutaura nemumwe munhu, ndapota fonera +86-27-85568138.
Kana iwe urikusangana nedambudziko nemidziyo yako, tifonere uye mushure mekurukurirano pfupi, tinogona kuona kana mumwe munhu achifanira kuuya panzvimbo yako kuti awedzere kuongororwa uye kugadzirisa kana kana michina ichizotumirwa kufekitori yedu.
HV Hipot Electric CO., Ltd inopa masevhisi akakura ari pasaiti kuchengetedza yako yakakwira voltage yekuyedza michina ichishanda nemazvo, zvichiita kuti iwe uchengetedze kambani yako ichigadzira.Chikwata chedu cheAfter-sales Service Injiniya inyanzvi mumunda wekuyedzwa kwemagetsi akakwira, uye anowanikwa kwamuri mose Mumba nePanyika, gore rese.Tichiri pasaiti, isu tinogona zvakare kutarisa kushanda kwese kweiyo sisitimu uye kuongorora chero nyaya dzinogona kunge dziripo.
Kune akawanda akakwira voltage bvunzo uye zviyereso zvekushandisa, macalibrations epagore kana macheki ekuita anokurudzirwa kuti ive nechokwadi chekushanda kwakaringana uye nekurongeka.
Iyo Calibration inogona kuitwa nevechitatu verification masangano akashanda nesu kwemakore mazhinji, akadai seNational Center yeHigh Voltage Measurement, Hubei Institute of Measurement uye Testing Technology yemagetsi parameter & HV yekuyera masisitimu e: impulse voltages, AC voltages, uye DC voltages.Yese bvunzo uye calibrations inoitwa zvinoenderana EN17025 zviyero.
Hubei Institute of Measurement uye Testing Technology
Yakakwira Voltage AC/DC Digital Meter yakayerwa neHubei Institute of Measurement uye Testing Technology.
GDYL-10 Kv /100PF Calibration Chitupa
Kana iwe uchida kuwana rumwe ruzivo nezve yechitatu bato calibration, ndapota taura neMutengi Maneja wedu zvakananga.
Isu tinopa vatengi vane ex-fekitari mishumo uye zvitupa zvezvese zvigadzirwa zvinoenderana neyakasiyana-siyana yenyika uye yepasirese zviyero.
4. Kuongorora & Maintenance
Kugadzirisa kwakakodzera kweyako yakakwira voltage yekuyedza kwakakosha pakuenderera kwayo kushanda uye kunogona kudzivirira kusashanda zvakanaka kumisa kugadzirwa kwako.Mukufamba kwenguva, mari inosanganisirwa nekuchengetedzwa kwekudzivirira icharatidza hupfumi hwepamusoro kana ichienzaniswa nekurasikirwa kwechigadzirwa uye purofiti nemidziyo isingashande, kunyanya kana zvasvika pakudzikira kwenguva refu kana kumira kwakazara mukugadzira.
Mainjiniya edu ane ruzivo, akadzidziswa zvakanyanya sevhisi haazongope yakarongwa kugadzirisa chete asi anozopa vatengi kurudziro yakanangana nechigadzirwa chekuti ungarebesa sei hupenyu hwemidziyo yekuyedza.
RUTSIGIRO rwevatengi, KUDZIDZWA & KUSVIRANA
HV Hipot Electric Co., Ltd. inyanzvi mukugadzira, kusimudzira, kugadzira, kuisirwa uye kutengesa kwakasiyana-siyana yemhando yepamusoro yemagetsi ekuyedza michina zvinoenderana nezvinodiwa nedzimwe nyika.Pamusoro pezvo, timu yedu yehunyanzvi inogona kupa masevhisi ega ega neruremekedzo kune yakakwira voltage test system pamwe nekuita kwakanangana nekuita kwehunyanzvi bvunzo zvinodiwa.
Ukama hwedu nevatengi vedu haumire nekuendeswa kwemidziyo.Svika hunyanzvi hwedu kana matambudziko amuka.Isu tinogona kupa yakarongeka tekinoroji masevhisi mhinduro kune izvo zvikumbiro pamusoro uye nepamusoro pezvinoda kuitwa bvunzo.
Chinangwa chechirongwa chedu chekudzidzisa ndechekukubatsira iwe kuwana ruzivo uye kuchengetedza mari.Isu tinoronga kutsanangura akawanda ebvunzo mhinduro dziripo dzekuongororwa bvunzo uye nzira yekumhanyisa nguva yebvunzo mumunda - asi ndiko kutanga.
Kana zvichidikanwa, kudzidziswa kwechigadzirwa kunogona kupihwa pachena mukambani yedu.
Tichivimba nehunyanzvi kumashure kwevakawanda vakuru veR&D mainjiniya uye kusimba kwehunyanzvi hombe-yepamusoro-voltage murabhoritari nzvimbo dzekudzidzira, kambani yakatanga kuronga simba remumunda bvunzo dzehunyanzvi hwekudzidzisa makosi uye tekinoroji yekutsinhana salon muna 2012. Kusvikira zvino, ine zvakawanda kupfuura 100 zvikamu uye vakadzidzisa vanopfuura zviuru zvishanu vadzidzi.Kuti ikurudzire hunyanzvi hwekutsinhana mumunda wekuyedza simba, yakagadzira mazano matsva uye nzira nyowani.
Yakazvipira kuyedza magetsi epasi rese vatengesi, tarisira kushanda pamwe newe.